Oligocene: njirimara, geology, ihu igwe, flora na fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Oligocene
N'oge Oge Cenozoic enwere mgbanwe dị iche iche na mbara ala ma na geology na flora na fauna. Taa, anyị ga-ekwu maka oge nke atọ mebere Cenozoic. Ọ gbasara Oligocene. Oligocene sitere na ihe dịka 33.9 nde afọ gara aga ruo ihe dịka 23 nde afọ gara aga. N'ime afọ ndị a niile, ụwa anyị gbanwere mgbanwe ndị pụtara ìhè. Mgbanwe ndị a bụ ihe butere redistribution nke ndị dị ndụ, ma osisi ma anụmanụ. Na mgbakwunye, ihu igwe rụrụ ọrụ dị mkpa n'oge mgbanwe nke ihe ndị dị ndụ ebe ọ bụ na o kere ọnọdụ ụfọdụ ka anụmanụ ụfọdụ ma ọ bụ osisi nwee ike ịbawanye ụba na ndị ọzọ agaghị adị ndụ. N'ụzọ dị otú a, e guzobere ụdị nhọrọ ọhụrụ.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Oligocene.
2 Oligocene Geology
3 Oligocene ihu igwe
Oligocene bụ oge na-amasịkarị ndị ọkachamara niile na-elekwasị anya n'ịmụ ihe geological oge. Ndi nile etinyego oge zuru oke imuta ihe ezoro ezo banyere onodu uzo ala di iche-iche nke uwa ka hapuru ihe ndi n’adighi nma mere na uwa anyi n’oge Oligocene.
Nke a bụ oge nke were afọ nkezi 11 afọ. N'ime oge a, emezigharịrị kọntinenti maka mmegharị nke mbadamba kọntinent ahụ. Ntughari a emeela ka kọntinent nwee ọnọdụ yiri nke ha nọ taa. Oligocene makwaara dị ka afọ nke mammals. Ma ọ bụ na ọ bụ otu ìgwè ụmụ anụmanụ nwere ike ịnwe ọtụtụ ụdị dị iche iche n'oge a. Ọ bụ n'ime oge nke a nde afọ 11 mgbe ngalaba nke mammals dị ka òké ma ọ bụ canids pụtara.
Banyere geology nke Oligocene ọ bụ oge a na-arụ ọrụ dị ukwuu na iji nri ala. Anyi nwere ike ihu na nkewa nke nnukwu mpaghara Pangea gara n'ihu ma otutu iberibe ya ka akwusiri inwe onodu dika nke ha nwere ta Usoro abuo buru ibu buru ibu n'oge a: Lrogenide Orogeny na Alpine Orogeny.
Anyị ga-agabiga njirimara niile nke Oligocene n'otu n'otu. Anyị na-amalite na geology. Mpekere nke nnukwu kọntinent a maara dị ka Pangea ọ bịara pụta ìhè karị mgbe e kewara iberibe iberibe akwụkwọ kwekọrọ na South America. Ngbanwe a nke kọntinent ahụ mere ka ọ ghara ịdaba na ọdịda anyanwụ iji zute North America ma mepụta ihe anyị maara taa dị ka kọntinent America n'ozuzu ya.
Antarctica gara n'ihu nkewa ya site na mpaghara kọntinent ndị ọzọ na mkpuchi ice dị omimi ka ọ na-erukwu nso na South Pole. E nwere ọtụtụ ndị ọkachamara gọnahụrụ nkwubi okwu dịgasị iche iche dịka nke a n'oge a, efere kwekọrọ na kọntinenti Africa jikọtara Eurasia ma mee ya na mpempe akwụkwọ anyị maara ugbu a dị ka India.
Na ngwụcha nke Oligocene, igwe mmadụ niile nọrịị n'ọnọdụ dị nnọọ ka nke anyị nwere taa. Otu a ka ọ dịkwa maka oké osimiri. E mere ndokwa n'oké osimiri n'ụzọ nke na e nwere ọtụtụ oké osimiri ndị kewara kọntinent ndị dị taa. N'ime oke osimiri ndị a, anyị nwere ike ịkọwa Oke Osimiri Pasifik, Oke Osimiri Atlantic na India.
Oligocene ihu igwe
Banyere ihu igwe Oligocene, ọnọdụ ndị ahụ dị oke egwu. Ihe e ji mara ya bụ oke okpomọkụ. N'oge a niile ma Antarctica na Greenland nọgidere na-ekpuchi ice ma na-abawanye ụba. N'otu aka ahụ, mgbe Antarctica kewapụrụ kpam kpam na South America, ọ mere ka mmiri mmiri dị iche iche gbasaa gburugburu ya. Otu n'ime oke osimiri ndị a bụ Circumpolar Antarctica. A na-ahụta ugbu a bụ otu ihe kacha mkpa, ebe ọ bụ na ọ bụ ya kpuchiri kọntinent niile nke Antarctica na ice na nguzo nke glaciers.
Mbelata nke okpomoku zuru ụwa ọnụ kpatara nsonaazụ na mgbanwe nke ụfọdụ okike. Ihe otutu nke ahihia bu oke ohia na ahihia. Osisi ndị a enweela ike ịnagide gburugburu oke oke a n'ihi na ha nwere ike ibi ndụ na obere okpomọkụ.
Ihe niile dị ndụ wee na-adịwanye iche, ma na osisi ma na anụmanụ. N'agbanyeghị eziokwu na ọnọdụ ihu igwe adịghị mma kpamkpam, ihe ndị dị ndụ nwere ike ime mgbanwe n'ọnọdụ ndị a ma dịrị ndụ.
Ka anyị buru ụzọ kwuo maka flora. Oligocene flora mara na angiosperms nwere ike ibido gbasaa site na otutu ebe obibi. Osisi ndị a ruru ike ha nwere taa. N'ime oge a niile, enwere ike ịhụ mbelata nke oke ohia nke okpomoku n'ihi ọdịda nke okpomoku zuru ụwa ọnụ. Ejiri osisi na ahihia ahihia nke ahihia a weghaara oke ohia ndi a ka eme ha ka ha nwee otutu onodu oku. Ala ahịhịa ndị a na ahịhịa ndụ na-agbasa na mpaghara niile.
Ma obu na ahihia ahihia nwere ezigbo ihe omuma site na ntughari nke njirimara ha na uto. Osisi ndị a nwere uto na-aga n'ihu na-eto eto na-anaghị akwụsị akwụsị. Na mgbakwunye, ụdị osisi ndị a ga-eche ihu nke anụmanụ dị iche iche dịka ndị graz na-eri ha. Nke a bụ otu ha ga - esi nwee ike ịmepe ikike dị iche iche iji nwee ike ịlanarị gburugburu ndị a yana ọbụnakwa nwee mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta na anụmanụ ndị ọzọ. Ọ bụkwa ya mere na ọtụtụ anụmanụ nyere ha aka ịgha mkpụrụ ha site na nsị.
N’oge a kwa E mepụtara ụdị osisi Legume dị ka agwa.
Banyere fauna, enwere otutu umu anumanu ndi nwere ike igbasa ma nwekwuo ebe ha na-ekesa. N'agbanyeghị ọnọdụ ihu igwe a hụrụ ha, ọtụtụ ìgwè anụmanụ dịka nnụnụ, anụ na-akpụ akpụ na anụmanụ na-abawanye nkesa ha.
E nwere nnụnụ na ihe na-akpụ akpụ, ọ bụ ezie na ọ bụ anụmanụ ndị na-enye anụmanụ na-ewere aha kachasị. N'ụzọ dị oke mkpa, a na-ahụ Cenozoic dị ka oge nke mammals.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Oligocene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Oligocene